Etu esi ebudata ọdịnaya na Netflix iji lelee ha n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Netflix Ọ bụ taa otu n'ime vidiyo kachasị ewu ewu na ọrụ ndị dị adị, ọ bụghị naanị na mba anyị ma ọkara ụwa. Ugbu a, o nwere ndorondoro na Spain na mbata nke HBO, mana ọ dị ka ha chọrọ ihu ya na ụnyaahụ ha malitere ogologo oge echere maka nbudata ọdịnaya, nke mere na mgbe ha hụrụ ya n'oge ọ bụla na ebe na-enweghị ịgbapụ nke data na ọnụego anyị.
Ugbu a onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịme atụmatụ, dịka ọmụmaatụ, njem ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala wee budata ụfọdụ isi nke usoro ahụ ọ na-ele ma ọ bụ ihe nkiri, iji nọrọ njem na-atọ ụtọ ma na-atọ ọchị. Ya mere, na ị nwere ihe niile ị na-achịkwa, taa anyị ga-akọwa gị n'ụzọ dị mfe esi budata ọdịnaya na Netflix iji lelee oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
1 Kedu ọdịnaya enwere ike ibudata?
2 Etu esi ebudata ọdịnaya Netflix
3 Ogologo oge ole ka nbudata ahụ ga-ewe ogologo oge ole ka anyị ga-echere?
4 Echiche anyị mgbe anyị gbalịrị nhọrọ ọhụrụ Netflix
Kedu ọdịnaya enwere ike ibudata?
Anyị nwere akụkọ ọjọọ ma ọ bụ ọ bụghị ozi ọma niile ịchọrọ, nke ahụ bụ na ọ bụghị ọdịnaya niile enwere ike ibudata n'ihi ikike ịgbasa ozi, yana ugbu a naanị akụkụ nke ihe niile na Netflix nwere ike ibudata.
Iji nweta ọdịnaya niile na-ebudata, e mepụtara ngalaba dị iche iche ị nwere ike ịchọta na menu ọrụ. Iji nye gị echiche n'okpuru anyị mere gị a Nchịkọta nke isi ọdịnaya na ị ga-enwe ike ibudata na-enweghị nsogbu ọ bụla na n'ụzọ dị mfe;
Netflix aha:'Narcos', 'Okpueze', 'Onye Ahọpụtara Ahọpụtara', 'Paranoia', 'Onye Njọ', 'oflọ Kaadị', 'Grace na Frankie', 'Bloodline', '3%', 'Marcella', 'The Alaeze Lasr ',' Glitch ',' Nwa agbọghọ ahụ ',' Nnupụisi ',' Flacked ',' Expanse ',' Sense8 ',' Stockholm ',' Oroma bụ Black Ọhụrụ ',' Marco Polo ',' The Down Down ',' Unbreakable Kimmy Schmidt ',' Alaeze Ukwu Rome ',' Lovehụnanya ',' Ndị na-akpọ asị ',' Onye isi nri ',' The Ranch ',' Black Mirror ',' Osimiri ',' Marseille ',' Amanda Knox ',' Nna-ukwu nke onye ọ bụla ', wdg.
Aha ndị mba ọzọ:''Lọ', 'Ezi Nwunye', 'Jane Virgin', 'The Fall', 'Hancock', 'The Grinch', 'akinghapụ ihe ọjọọ', 'Ahịhịa', 'inggafe Usoro', 'Skins', 'Dexter ',' Archer ',' The Late Bloomer ',' Cuckoo ',' suut, 'Scorpio', 'Brooklyn Nine-nine', 'Okwu Eze', 'Ray Donovan', 'Untouchable', 'The Slevin Affair' , 'Ọrụ', 'Gilmụ nwanyị Gilmore', 'Vis a vis', wdg.
Etu esi ebudata ọdịnaya Netflix
Netflix chọrọ ka anyị mee ka ọ dị mfe ma ibudata ọdịnaya anyị ga-enweta naanị fim ma ọ bụ isi nke usoro a kapịrị ọnụ anyị chọrọ ibudata. N'oge ahụ na ọ dị mwute ịnweghị ike ibudata usoro zuru ezu, ihe ga-abụ ihe na-atọ ụtọ.
Dị ka anyị na-ahụ na foto ndị a na-esote n'akụkụ bọtịnụ egwu anyị ga-ahụ akara ngosi ọhụụ nwere akụ akụ. Ọ bụrụ na anyị pịa ya, ọ ga-amalite ibudata ọdịnaya ahụ na akpaghị aka.
Dịka ị pụrụ ịhụ nbudata ọ bụla a na-eme, anyị nwere ike ịhụ ya na ala nke ihuenyo mbụ, yana na ngebichi ọ bụla Netflix.
Ogologo oge ole ka nbudata ahụ ga-ewe ogologo oge ole ka anyị ga-echere?
Dịka anyị kwurula, nhọrọ nke ibudata ọdịnaya na ngwaọrụ anyị sara mbara nke ukwuu, na n'ezie ajụjụ ọzọ ị na-ajụ onwe gị bụ oghere ha bi. Ikike nke nbudata ọ bụla anyị na-eme ga-adabere ntakịrị na anyị onwe anyị na nke ahụ bụ na "Ngwa Ntọala", nke anyị nwere ike ịchọta na nchịkọta nhọrọ, anyị nwere ike ịhọrọ ogo nke anyị chọrọ ịme nbudata ahụ.
Ohere inweta bu "Ọkọlọtọ", nke pụtara nbudata ngwa ngwa na obere oriri n'ihe gbasara ohere nchekwa na ngwaọrụ anyị.. Nhọrọ "Elu" dịkwa, nke nwere oghere nchekwa ka ukwuu na nbudata ọdịnaya ga-ewe ogologo oge.
N’ime nnwale anyị merela un isi nke otu awa na ọkara ewerela anyị ihe karịrị 450 MB na ogo mara mma na 1.2 GB na mma. Niile ohere nchekwa dị mkpa iji chekwaa fim ma ọ bụ ngosipụta nke usoro, ga-abịa kpọmkwem site esịtidem ohere nchekwa nke ngwaọrụ gị. N'oge enwere ike ịchekwa nbudata na kaadị SD nke ngwaọrụ adịghị ma ọ bụrụ na anyị nwere ya, ọ bụ ezie na a ga-eche na nke a ga-arụ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
Echiche anyị mgbe anyị gbalịrị nhọrọ ọhụrụ Netflix
Anyị niile ndị na - eme njem kwa ụbọchị n'ụgbọ okporo ígwè, bọs ma ọ bụ ọbụlagodi n'ụgbọala dị ka ndị enyi, anyị echefuru ohere iji Netflix (na ụdị ọrụ ndị ọzọ a) na - anọghị n'ịntanetị ma ọ bụ ihe nwere ike ibudata ọdịnaya, site na njikọ WiFi, wee jiri ya na-enweghị ịbanye na njikọ data anyị.
Ahụmahụ mbụ anyị nwere abụrịrị nke ọmaỌdịdị nke mmeputakwa dị ezigbo mma na-enweghị itinye nnukwu ohere na nchekwa dị n'ime ngwaọrụ anyị, nke n'ọtụtụ oge ga-abụ ama na obere mbadamba, nke ga-adị mgbagwoju anya iburu anyị.
Otu n'ime ntụpọ anyị hụrụ na arụ ọrụ ọhụụ ọhụrụ Netflix a bụ nke enweghị ike ịchekwa ọdịnaya ebudatara na kaadi microSD. N'okwu m na emeela m ule ahụ na iPhone, nsogbu na-apụta mgbe niile na oghere nchekwa, n'agbanyeghị ole o nwere 64GB. Olileanya n'oge na-adịghị anya, anyị agaghị ahụ naanị ohere ịchekwa ọdịnaya na microSD, kamakwa igwe ojii kere na maka Netflix.
N'ikpeazụ, enweghị m ike ịsị na nbudata ọdịnaya na ịhazi ya bụ nke kachasị mfe, ọ bụ ezie na a bịa ihichapụ ọdịnaya, ihe na-adịwanye mgbagwoju anya na ọ bụ na mgbe ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ, isi nke usoro ahụ na-ewe oge iji bụrụ ewepu ma karisia na emelite oghere nchekwa anyi.
Kedu ihe ị chere banyere nhọrọ ọhụrụ nke Netflix na-enye anyị ka anyị budata ọdịnaya iji chekwaa ya na ngwaọrụ anyị ma lelee ya ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla anyị chọrọ?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu esi ebudata ọdịnaya na Netflix iji lelee ha n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla
Igwe ojii? You na-arịọ maka igwe ojii ebe ị nwere ike ịchekwa ọdịnaya ahụ? Olee nzuzu nke ahụ bụ? Ọ bụrụ n’inwere n’igwe ojii ị ga-ebudata ya yana maka nke ị chọrọ njikọ Internetntanetị… Maka nke ahụ, ọ ka mma ile ya anya na nkwanye. Inwe ike ịchekwa ya na SD bụ naanị nhọrọ nwere ezi uche mana echeghị m na ọ ga-ekwe omume ebe m chere na ọ ga-ezoro ezo ọdịnaya ka enwere ike hụ ya site na ngwa Netflix ka ị ghara ịnwe nhọrọ ahụ kpọgidere ya na ịntanetị
Ọ bụghị nzuzu, ọ dị ka ọ na-aga nke ọma, a na m achọ otu ihe ahụ, budata n'igwe ojii na ihe kpatara ya dị mfe, ana m ebudata n'ụlọ (na igwe ojii) wee hụ ya n'ọfịs
Pebble enweghị ike iguzogide ahịa nke ahịa ma Fitbit zụtara ya